Igesi yemvelo engaphandle komkhawulo webhethri iqala ngokucindezelwa ibe ngu-1.6Mpa yi-compressor, bese ishiselwa cishe ku-380 ℃ yi-feed gas preheater engxenyeni yokuguquguquka ye-steam reformer, bese ingena ku-desulfurizer ukuze ikhiphe isulfure kugesi ephakelayo ngezansi. 0.1ppm.
Ukuze wenze amanzi okuphakela kubhayela ahlangabezane nezidingo, inani elincane lesisombululo se-phosphate kanye ne-deoxidizer kuzongezwa ngcono ukukala nokugqwala kwamanzi abhayela. Isigubhu kufanele siqhubeke sikhipha ingxenye yamanzi akubhayela ukulawula ingqikithi yezinto eziqinile ezincibilikisiwe zamanzi abhayela esigubhu.
Iyunithi yokukhiqiza igesi yemvelo engama-500kg
Iyunithi yokukhiqiza i-hydrogen ye-Rongteng yegesi yemvelo
Inqubo yokukhiqiza i-hydrogen yegesi yemvelo ikakhulukazi ihlanganisa izinqubo ezine: igesi yokuphakelayo kusengaphambili, ukuguqulwa kwesitimu segesi yemvelo, ukuguqulwa kwe-carbon monoxide kanye nokuhlanzwa kwe-hydrogen.
Isizukulwane se-Rongteng hydrogen ngegesi yemvelo noma i-hydrogen gas generator
Igesi yemvelo njengophethiloli ixutshaniswa negesi ye-press swing adsorption desorption, bese ivolumu yegesi kaphethiloli ingena ku-preheater yegesi kaphethiloli ilungiswa ngokuya ngezinga lokushisa legesi lapho kuphuma khona isithando sokushintshashintsha. Ngemva kokulungiswa kokugeleza, i-fuel gas ingena ku-burner ephezulu ukuze ivuthe ukuze inikeze ukushisa esithandweni se-reformer.
Iyunithi yokukhiqiza i-Hydrogen engu-500KG eyenziwe ngegesi yemvelo
Sekukonke izici Idizayini ephelele ekhweziwe ye-skid ishintsha imodi yokufaka yasendaweni evamile. Ngokucubungula, ukukhiqiza, ukubhobhoza kanye nokwakhiwa kwe-skid enkampanini, yonke inqubo yokulawulwa kokukhiqizwa kwezinto, ukutholwa kwamaphutha kanye nokuhlolwa kwengcindezi enkampanini kufezeka ngokugcwele, okuxazulula ngokuyisisekelo ubungozi bokulawula ikhwalithi obubangelwa ukwakhiwa komsebenzisi endaweni, futhi ngempela. ifinyelela yonke inqubo yokulawula ikhwalithi. Yonke imikhiqizo ifakwe kwi-skid enkampanini. Umqondo...
Ngokwezifiso i-500KW kuya ku-8MW ijeneretha yegesi yemvelo kanye negesi yegesi evela embonini yaseShayina
Iyunithi ye-generator yegesi (ijeneretha yokulinda yegesi yemvelo) yamukela umklamo webhokisi lokuhlukanisa elihlanganisiwe, ibhokisi lingahlangabezana nokusebenza kwezimo eziningi zemvelo, futhi linemisebenzi yokuqinisekisa imvula, ukuvikela uthuli lwesihlabathi, ubufakazi bomiyane, ukunciphisa umsindo, njll. umzimba webhokisi uklanywe futhi ukhiqizwa ngesakhiwo esikhethekile kanye nezinto zokwakha zesitsha esinamandla aphezulu.